शिक्षा/चेतना – Page 20 – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / शिक्षा/चेतना (page 20)
एटीएम प्रयोग गर्दा सावधानी नअपनाउदा तपाईको रकम चोरिन सक्छ !!
April 3, 2016	आइसिटी रिपोर्ट, शिक्षा/चेतना, समाज खबर0757
एटीएम (अटोमेटेड टेलर मेसिन)को प्रयोग अहिले प्रत्येक व्यक्तिको अभिन्न अङ्ग जस्तै बनेको छ । विशेष गरी बैङ्किङ कारोबार गर्ने मानिसहरूमा एटीएम नबोक्ने कमै हुन्छन् । सहजता र सुरक्षाका हिसाबले समेत मानिसले पैसा भन्दा गोजीमा एटीएम राख्न रुचाउने गरेको पाइन्छ । दैनिक बैङ्किङ कारोबारमा यसको प्रयोगसँगै जोखिम समेत बढेको छ । ...
जानीराखौं !काठमाण्डौंबाट देशका बिभिन्न स्थान सम्मको दुरी कति
April 3, 2016	आइसिटी नेपाल, शिक्षा/चेतना, समाज खबर01,621
नेपालको राजधानी काठमाण्डौंबाट देशका बिभिन्न स्थान सम्मको दुरी यस्तो छ । स्रोतः वेभ तथा अन्य माध्यमहरु Distance Information S.N Root Name Distance in KM 1. Kathmadu-Kaliya 289 2. Kathmadu-Katari 419 3. Kathmadu-Karnali (Chisapani) 574 4. Kathmandu-Kaakadvitta 477 5. Kathmandu-Kumarkhoj 620 6. Kathmandu-Kuringhat 110 7. Kathmandu-Kurintar (Manakamana Cable Car) 106 8. ...
शहरमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको अवस्था यस्तो छ : खड्ग श्रेष्ठ
April 2, 2016	शिक्षा/चेतना, समाज खबर0902
मानिसको अनेक ईच्छा र अकांक्षा हुुनु स्वभाविक कुरा हो । मेरो रुची बाल्यकाल देखिनै समाजको सेवा गर्न रुचाउथे । फलस्वरुप काम गदै जाँदा २०६९ सालदेखि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागु औषध नियन्त्रण कार्याक्रम अधिकृतका रुपमा कार्यरत छु । यसमा मलाई आत्मसन्तुष्टि छ । नेपालमा लागु औषध दुरुपयोगको अवस्था भयाभह ...
माइक्रो, सुपर कम्प्युटर, रोवटर्, टेलिमेडिसिन र कम्प्युटर प्लान्टको आधारभुत जानकारी हाइटेक पायोनियरबाट लिदै बिद्यार्थीहरु
April 2, 2016	आइसिटी इभेन्ट/गतिविधि, आइसिटी नेपाल, शिक्षा/चेतना01,111
आधारभुत कम्प्युटर तथा अनलाइन पत्रकारीता तालिम अन्तर्गत चैत्र १९ गते शुक्रबार बिद्यार्थीहरुलाई मुनि शाक्यको इनोभेसन सेन्टर हाइटेक पायोनियरमा भिजिट गराइयो । तालिम कार्यक्रम जिल्ला खेलकुद विकास समिति, युवा सूचना केन्द्र काठमाडौंको र आइसिटी पत्रकार विकास मञ्च शाखा काठमाडौंको सहकार्यमा सञ्चालन भएको हो । चैत्र १९ गतेको फिल्ड भिजिटसँगै मुनि शाक्यले ...
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सूचनामुलक र साइवर अपराधमुक्त बनाउने काम आफैबाट शुरु गरौं — एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल
March 28, 2016	आइसिटी इभेन्ट/गतिविधि, आइसिटी रिपोर्ट, शिक्षा/चेतना, समाज खबर 1 1,241
– भरतराज उप्रेती मन्त्री र सभासद् भएर पनि कम्प्युटर नै चलाउन आउदैन भन्छन : विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, शिवललाल थापा कम्प्युटर शिक्षा आज सबैका लागि आवश्यक छ, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको ज्ञान बिना अबको जीवनशैली अपुरो नै हुन्छ । हाम्रो पालामा कम्प्युटर सिक्न न त के देख्न समेत पाइएन । ...
March 23, 2016	Student Profile, शिक्षा/चेतना, समाज खबर, सोसल प्रोफाइल01,037
यसरी खाना पकाउने १० विधि प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको ग्याँस २ महिना बढी टिक्छ
March 22, 2016	शिक्षा/चेतना, समाज खबर0832
सहरमा बस्नेहरुका लागि सबैभन्दा पिरलो बन्ने गरेको छ खाना पकाउने ग्याँस । हरेक घर/घर र कोठा कोठामा ग्याँस गन्थन हुन्छ । अझ नाकाबन्दीपछि त झन् खाना पकाउने ग्याँसको हाहाकार नै मच्चियो । नाकाबन्दी खुलिसक्दा पनि खाना पकाउने ग्यास भने अझै सहज हुन् सकेको छैन । ६ महिनादेखि नाम लेखाएकाहरुले समेत अझै ग्याँस पाउन सकिरहेका ...
लौ ख्याल गर्नुहोस् ! संगत गर्न नहुने ८ प्रकारका मानिस
March 22, 2016	शिक्षा/चेतना, समाज खबर0463
‘संगत अनुसारको फल’ भन्ने नेपाली समाजमा एउटा भनाई नै छ । ‘चोरसँग संगत गरे चोर, सज्जनसंग संगत गरे सज्जन’ भन्ने अर्को भनाई पनि छ । भन्न खोजिएको के हो भने जो जस्तो मान्छेसंग संगत गर्यो त्यो मान्छे त्यस्तै स्वभावको हुन्छ । दैनिक जीवनयापनका क्रममा हामीले हजारौ मानिससंग संगत गर्छौ तर को सही र को ...
तपाईको काम बनेन!अब आम सर्वसाधारणले भारतीय रुपैया अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न सकिने
March 22, 2016	आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, शिक्षा/चेतना, समाज खबर0494
रुपैया पैसा अनि अनलाइनबाटै डाउनलोड ! सुन्दै अचम्म लाग्ने है ? तर यो सत्य हो अब भारतीय नोट अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न मिल्ने भएको छ । त्यो पनि आम सर्वसाधारणले । तर कसरी अनि किन ? तलको फोटो हेर्नुस, केही देख्नु भयो ? नदेख्नु भएको भए तल पढ्नुस् । घुस लिने र दिने कार्य अत्यधिक ...
होली खेल्दै हुनुहुन्छ ? कुन राशीका व्यक्तिले कुन रंगसँग होली खेल्ने ? जानीराखौ
March 22, 2016	शिक्षा/चेतना, समाज खबर0645
रंगहरुको पर्व होली मंगलबार धुमधामका साथ मनाईदै छ । बिभिन्न संघ संस्था र क्लबहरुमा आजै होली मनाइसकेका छन् । बाटोमा लोला हान्नेहरुलाई त एक हप्ता अघि देखि नै होली लागेको थियो । होली रमाइलोको पर्व मात्रै होइन यसका केही धार्मिक मान्यताहरु पनि छन् । असत्यमाथि सत्यको जितको प्रतिकका रुपमा मनाइने होलीको आफ्नै कथा ...